Muuri News Network » Gudoomiyaha G/Banaadir oo balan-qaad Geesinimo leh ku dhawaaqay….
Gudoomiyaha G/Banaadir oo balan-qaad Geesinimo leh ku dhawaaqay….
Feb 1, 2018 - Comments off
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa sheegay Maamulka Gobolka Banaadir inuu balan qaadayo inuu dhameystiro dayactirka wadooyinka harsan ee ku yaalla magaalada Muqdisho.
Eng. Yariisow oo xalay ka qeyb galay Munaasabad lagu soo dhaweynayay Maamulka cusub ee Gobolka Banaadir ayaa sheegay Isbuucyada soo socda in arki doono dhismooyin lagu bilaabo wadooyin muhiim oo ay ka mid tahay wadada Liido, taas bedelkeeda ayuu sheegay si loo gaaro shacabka in looga baahan yahay in ay bixiyaan canshuurta.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in qorshohooda uu yahay in Maamulkooda uusan ku ekaan xarunta Aqalka Dowladda Hoose, balse ay doonayaan in la arko iyaga oo dhexjooga Suuqa Bakaaraha, Hilliwaa iyo Deyniile, una adeegaya shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay Dowladda Soomaaliya in aysan gaarin meelo badan oo ka mid ah magaalada, balse ka Dowlad Hoose ahaan qorshohooda inuu yahay in ay gaaraan goobahaas, Dowladda Dhexena ay gaarsiiyaan, si loo helo isdhexgal bulsho, horumarna loo gaaro.
Sidoo kale Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa shacabka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan Maamulka cusub, si loo helo amni buuxa, dib u dhis, wada shaqeyn joogto ah, iyo isku filnaansho.
Waxaa jira wadooyin badan oo u baahan dayactir buuxa in lagu sameeyo, kuwaasi oo ku yaalla degmooyin ay ka mid yihiin Deyniile, Yaaqshiid, Kaxda, maadaama markii la helo wadooyin iyo Jardiino dalxiis, halkaasi uu ka dhalanayo isdhexgal bulsho.